Ọkachamara Semalt: Ndị Spammers na Ụdị Ịntanetị Intanet
Igor Gamanenko, Semalt Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ndị Ahịa, weere ndị na-agba akwụkwọ na ndị na-agba ọsọ na-adị ezigbo ncha. Ha na-akpata ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị anyị tụfuru na ntanetị, dịka nkwụsị nke ngwanrọ kọmputa na ịnyefe ego site na akaụntụ ọ bụla. N'ụbọchị ndị a, kọmputa na-agbapụta nsogbu aghọwo nnukwu nsogbu; onye ọ bụla n'ime mmadụ iri na-emetụta ndị spammers. Ha na-enweta ozi ndị a na-akwadoghị site na ozi-e ma ọ bụ usoro nkesa faịlụ. Ana m eji oge m oge igbochi spammers na ịntanetị. Enwetara m ya na ọrụ ndị na-ele anya na-ezighị ezi na ndị na-abụghị ndị ziri ezi.
Ọ dị mkpa na ị na-elekọta nchekwa gị na ịntanetị; ma ọ bụghị nke a, enwere ike ịnweta ozi nzuzo gị na ịntanetị ma ị nwere ike ịfu nnukwu ego. Ịkwụ ụgwọ maka bandwit bụ ezigbo echiche; nke a bụ n'ihi na mgbe ị na-akwụ ụgwọ maka bandwit, a na-emesi gị obi ike na ozi gị agaghị echefu. Ụdị ọ bụla nke spam, ma ọ bụ n'ụdị ozi ịntanetị ma ọ bụ blog kwuru, yiri nke a na-eyi ọha egwu. Ọ bụghị nanị na ị gafefu ozi gị kamakwa ngwaọrụ gị na-arụ ọrụ, ma, n'ezie, ego gị ga-efu. Ọ bụ eziokwu na ndị spammers na ndị omempụ adịghị egbu gị ozugbo, ma ha nwere ike imebi aha gị na ịntanetị..Ya mere, anyị nwere ike ikwu na spammers na hackers bụ ụdị dijitalụ nke carcinogens. Ha na-egbu gị na ịntanetị nwayọọ nwayọọ ma jiri nwayọọ nwayọọ; ọtụtụ mgbe, ị maghị ihe na-eme gburugburu ruo mgbe ego gị ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ gị furu efu.
Anyị aghaghị ịnakwere eziokwu ahụ bụ na mmadụ nile na-enweta ozi ịntanetị spam na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu, na-aza ajụjụ na weebụsaịtị na blọọgụ ha. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịkwatu ndị spammers. Ihe i nwere ike ime bụ igbochi IP ha ma kọọrọ FBI. Ndị Spammers na ndị omempụ na-emerụ ịntanetị kwa ụbọchị, ọ nweghịkwa ụzọ isi kpochapụ ha. Ụfọdụ n'ime ha na-eme ka ndị nnọchianya nke ndị ọrụ ebere ma ọ bụ ndị NGO, na-arịọ gị maka ego na onyinye. Aga m enwe mmasị inye onyinye ma ọ bụrụ na ejiri m n'aka na a ga-enyefe ndị m ziri ezi ego m. Ụfọdụ ndị spammers na ndị omempụ ọbụna na-eme ka ndị obodo Hollywood ma ọ bụ ndị nnọchianya ha; ha na-esonyere gị ma gbalịa ịzụlite mmekọrịta chiri anya.
Ọ dị mkpa na ị ga-ekpochapụ ndị spammers ma kọọrọ FBI na ngwa ngwa o kwere omume. Ọ bụrụ na mmadụ rịọ gị ka ị nye ego, ị nwere ike ịbịakwute m. M ga-agba mbọ m kacha mma iji mee ndokwa ego mgbe ịchọrọ nke ọma na nke ọma. Otu n'ime ụzọ ndị kachasị mfe ma bara uru iji kpochapụ spammers bụ site n'ịwepu aha na ọrụ na-abaghị uru. Ha na-ezitere gị ozi nzuzu na ezighi ezi dịka ntinye aha email dị na databank ha na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama. Ọbụna ebe mgbasa ozi mgbasa ozi anyị adịghị enwe ozi na-enweghị njikọ ndị na-abaghị uru. Ndị ọrụ Facebook na Twitter kwesịrị ịkpachapụ anya ka ndị na-agba ọsọ nwere ike izigara ha njikọ ụgha na otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu. I kwesịghị ịpị njikọ ndị ahụ, ma ọ bụghị nke a, ị nwere ike idaba na kọmputa gị Source .